Falanqeynta Kulamada Soo Socda Ee Horyaalka Spain Ee La Liga Ee Todobaadkan La Ciyaaryo. | Berberanews.com
Home CAYAARO Falanqeynta Kulamada Soo Socda Ee Horyaalka Spain Ee La Liga Ee Todobaadkan...
Falanqeynta Kulamada Soo Socda Ee Horyaalka Spain Ee La Liga Ee Todobaadkan La Ciyaaryo.
(Berberanews Sports):- *Tababaraha kooxda Barcelona Pep Guardiola ayaa beeniyay in daafaciisa dhexe Gerard Pique inuu si u la kac ah u qaatay Kaadhkii-huruuda ahaa ee shanaad ee xilli ciyaareedkan kaulankii ay talaadada 4-0 kaga badiyeen kooxda Rayo Vallecano, si uu u maqnaado kulanka Levante ee sabtida ee soo galaya 9ka fiidnimo xilliga geeska africa, islamarkaana uu diyaar u noqdo kulanka todobaadka soo socda ee El Clasico.
Saxaafada Madrid ayaa inta badan soo warineysay maalmihii u danbeeyay in xidhiidhka kubada cagta Spain uu Pique ganaaxayo labo kulan, madaama uu waqti dhumis ku qaatay jaale, lakiin xidhiidhka ayaa sheegay in kaliya uu maqnaanayo kulanka sabtida ee Levante.
“Arimahan oo kale tababarka kuma sameyno” ayuu Guardiola ku yidhi shirkiisa jaraa’id. “Hadii aanba u soo diyaargarownay sidaas oo kale uma aanan sameeyeen”ayuu hadalkiisa raaciyay.
Guardiola ayaa kooxdiisa ay taam u tahay kulanka ay sabtida ku soo dhaweynayaan garoonka Camp Nou kooxda kaalinta afaraad ee Levante, marka laga reebo Pique iyo Adriano oo dhaawac ah.
Kooxda horyaalka difaacaneysa ayaa ku jirta kaalinta labaad iyagoo leh 31 dhibcood 14 kulan oo ay ciyaareen, waxa ay seddex dhibcood ka danbeeyaan kooxda Real Madrid oo leh 34 dhibcood 13 kulan oo ay ciyaareen.
*Weeraryahanka Real Crsitiano Ronaldo ayaa tababarka ku soo laabtay shalay oo khamiis aheyd ka dib markii uu seegay tababarka maalmihii danbeeyay dhaawac yar oo uu ka soo qaaday kulankii Atletico Madrid.
Tababaraha kooxda Real Jose Mourinho ayaa waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanka khadka dhexe Xabi Alonso oo ganaax kaga maqnaan doona kulanka Sporting Gijon oo ay la ciyaarayaan 7da fiidnimo maalinta sabtida ah, waxaana lagu wadaa in Nuri Sahin uu bedeli doono.
Real ayaa waxa ay isku dayaysaa inay gaarto guushii 10aad oo isku xigta oo La Liga ah, iyo guushii 14aad oo isku xigta oo tartamada oo dhan ah.
Weeraryahanka Real Karim Benzema ayaa sheegay in kooxdiisa ay diyaar u tahay kulanka ay la ciyaarayaan Barca todobaadka danbe.
“Ma dooneyno inaan wax badan ka fekerno Barcelona ama aan ka hadalno iyaga sababtoo ah waa ognahay inay yihiin mid ka mid ah kooxaha adduunka ugu fiican” ayuu Benzema u sheegay maanta wargeyska AS.
“Lakiin, hal sheey ayaan ku sheegi karaa, diyaar ayaan u nahay iyaga”
* Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Valencia Tino Costa ayaa sheegay in ciyaartoyda kooxdiisa ay maanka ku hayaan kulanka talaadada ee Champions League ee go’aanka lagu gaadhayo ee ay la leeyihiin kooxda Chelsea, ka hor kulanka sabtida ay la ciyaarayaan Espanyol.
“Qofkii yiraahda ciyaarta Chelsea kama fekerayaan been ayuu sheegayaa sababtoo ah dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan kulankaas badino” ayuu Costa u sheegay AS.
“Lakiin rootigeena maalinlaha ah waxaan ka helnaa La Liga” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Valencia ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta seddexaad iyagoo afar dhibcood ka danbeeya Barcelona balse hal kulan uu u sii haray.
Ciyaaryahankii hore ee Valencia iyo Argentina Mario Kempes ayaa sabtida goob joog ka ahaan doona kulankaas, waxaana kooxda ay u gudbisay taageerayaasha qorshe ah in magaciisa ay hal mar kuwada dhawaaqaan daqiiqada 10aad ee ciyaar kasta.
Isagoo loo yaqaano ‘matador’, Kempes waxa uu u soo xidhay Los Che maaliyada numberka 10aad, waxaana uu u soo dhaliyay 108 gool oo horyaalka ah 170 kulan oo uu u saftay dhamaadkii 70meeyadii iyo bilowgii 80meeyadii.
*Labada ciyaaryahan ee Atletico Madrid Arda Turan iyo Adriano ayaa seegay tababarkii qamiista ka hor kulanka axada ay garoonkooda kula ciyaarayaan kooxda Rayo Vallecano.
Previous articleBarcelona Oo Shaaca Ka Qaaday In Aanay Waligoodna Dalban Doonin Ronaldo Madaama Ay Heystaan Messi.
Next articleHaweenay Soomaaliyeed oo Maxkamad Maraykanka ah ka hor qiratay inay dhaqaale u dirtay Al-shabaab